Deetaa hangiiwwan man'ee qofagaloo tokko ykn tokkoo oli makuun, fankishinii ifteessitetti fayyadamuun hammangaa haaraa shallaga.
fankishinii deetaa gamteessuu barbaaddee fili.
Hangii man'ee gamteessuu barbaaddee agarsiisa.
Hammanga deetaa maddaa
Man'ee duraa iddoo bu'aawwan gamtaa'inaa itti agrsiifaman agarsiisa.
Hammanga man'ee sanduuqa Hammanga deetaa maddaa fi sanduuqa hammngawwan gamtaa'inaakeessatti ifteessaman walitti ida'a.
Dirqalaalee dabalataa agarsiisa.
Title is: Gamteessi